दूरसंचार Archives - Mobiles Khabar
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:५६ Leaveacomment
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको काम कारबाहिको बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सुर्य बहादुर राउतको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो । वैशाख ३१ गते गठन भएको सो समितिमा संयोजक राउतसहित कमल खरेल तथा मन्त्रालयकै उपसचिव अनुप नेपाल सदस्यको रुपमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो समितिले ...
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार १२:३३ Leaveacomment
३० बैशाख २०७५, आईतवार १५:०३ Leaveacomment
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ओटीटी सेवाका कारण कम्पनीको आम्दानीमा असर परेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले पछिल्लो दिनहरुमा ग्राहकहरुको आकर्षण डाटामा बढिरहेको भन्दै त्यसको लागि समेत नयाँ प्याकेजहरु ल्याएको र शुल्क समायोजन गरेको कारण आम्दानीमा असर परेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या घट्दै जाँदा र भाइबर, स्काइप, ...
२५ बैशाख २०७५, मंगलवार १९:३८ Leaveacomment
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेअनुसार मन्त्रालयले स्पष्टिकरण पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको काम कारबाहि प्रभावकारीरुपमा नभएको र कार्यदक्षतामा कमजोर रहेको ...
१८ बैशाख २०७५, मंगलवार १३:०५ Comments Off on अमेरिकाका दुई ठूला मोबाइल अपरेटर एक आपसमा गाभिए, अझ सस्तो मूल्यमा सेवा दिने
काठमाडौं । अमेरिकाका दुई ठूला मोबाइल अपरेटर स्प्रीन्ट (Sprint) र टि-मोबाइल (T-Mobile) एक आपसमा गाभिएका छन् । दुबै कम्पनीहरुले सोमबार सम्पूर्ण शेयर खरिद बिक्री कारोबार गरिने घोषणा गरेका छन् । दुबै कम्पनी मर्ज भएपछि बन्ने कम्पनीको नाम टि-मोबाइल राखिने छ र त्यसको मुख्यालय हाल टि मोबाइल रहेको वासिंगटनको वेलेभ्यू नामक स्थानमा राखिने छ । त्यस्तै अर्को मुख्यालय हाल स्प्रीन्टको मुख्यालय ...
१७ बैशाख २०७५, सोमबार १३:०१ Comments Off on आइएमइआइ दर्ता नभएका मोबाइल फोन प्रयोगमा रोक लाग्दै, यसरी थाहा पाउनुस् आइएमइआइ नम्बर ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विदेशबाट अवैधरुपमा आउने मोबाइल फोनहरुलाई नेपालमा प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउने भएको छ । प्राधिरकणले नेपालमा भित्र्ने मोबाइल फोनहरु अनिवार्यरुपमा प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने र त्यस्तो फोनको रेकर्ड राख्ने गरि नयाँ अटोमेटेड प्रविधि संचालन गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले हालै नेपालमा भित्र्ने मोबाइल उपकरणहरु दर्ता गर्नका लागि इक्यूपमेन्ट आईडेन्टिटि रजिस्ट्रेशन(इआईआर) को विनियमावली पारित गरेपछि नेपालमा अवैधरुपमा आउने ...
युटिएललार्इ पूँजी वृद्धिको अनुमति, कहिले होला सेवा शुरु ?
१६ बैशाख २०७५, आईतवार १३:०५ Comments Off on युटिएललार्इ पूँजी वृद्धिको अनुमति, कहिले होला सेवा शुरु ?
काठमाडौं । यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले चार अर्ब रुपैयाँले पूँजी वृद्धिको अनुमति पाएको छ। उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२५ औं बैठकले युटिएललाई सो पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएको हो । यसअघि दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएको युटिएलले चार अर्ब रुपैयाँ पूँजी वृद्धि गर्ने अनुमति पाएसँगै कम्पनीको कुल पूँजी छ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। ...